Ciyaaraha oo ah farshaxanka cusub ee sawir qaadista | Abuurista khadka tooska ah
Ciyaaraha oo ah farshaxanka cusub ee sawir qaadista
Jose Angel | | Design Graphic, Sawir, General
Haddii markasta oo aan ka hadlayno farshaxanka aan sameyno annaga oo ka fikirayna rinjiyeynta Picasso ama heesta Michael Jackson waa cuqdad uun. Farshaxanka toddobaad wuxuu matalayaa agaasimayaasha sida Christopher Nolan ama Tarantino. Ciyaaraha fiidiyowgu ma noqon doonaan farshaxankii siddeedaad ee mustaqbalka laga wada hadli doono?
Waxaa jira dad badan oo waqtigooda ku qaata ciyaaraha internetka. Qaar kale oo badan si ay u ogaadaan iyo kuwa kale oo ay wax u baraan. Ciyaaraha elektaroonigga ah waa wax aan ka badnayn isboortiga casriga ah ee elektaroonigga ah ee muujiya malaayiin qof oo adduunka ku lug leh. Firfircoon ama si socod ah.
Laakiin in ka badan ciyaar, waxaa jira hal abuurayaal ku jira instagram iyada oo ujeedadu tahay in farshaxan laga dhex helo tan. Haa, sawirada daqiiqadaha "epic" ugu - sida ay ugu yeeraan - ee kulamada halista ku jira.
Dunida youtubers-ka ayaa ka badan inta la yaqaan, laakiin waxay ku kooban yihiin oo keliya ciyaar, waxaan ka hadlayaa koontooyin sida ArtVideoGames.
Farshaxanka Ciyaaraha Fiidiyowga iyo kuwa kale
Noocyada xisaabaadka noocan ahi waxay u adeegsadaan saacadaha ciyaarta wax ka badan shaashadda oo keliya. Waana inuu isagu markasta istaago si uu awood ugu yeesho inuu sawir kaga qaado kumbuyuutarkiisa.
ArtinVideoGames waxay qabataa gebi ahaanba daqiiqado dabiici ah oo aad u aragto kuwa ugu cajiibka badan. Oo hadaad ka mid tahay kuwa isku mid sameeya laakiin aan waqtiga ahayn, u soo dir emaylkiisa isaguna wuu ku daabici doonaa. Galerialakitu waa koonto kale oo Instagram ah oo taas u heellan oo xitaa iyaga wax ka beddeleysa si loo abuuro jawi u qalma waxa xirfadle sawir qaade ah sameyn doono
warriors_concept, wuxuush_clubs ... Waxaa jira xisaabaadyo badan oo loogu talagalay tan maanta, in kasta oo ay yihiin kuwo aan laga warqabin oo aan laga aqoon dadweynaha guud, haddana waxay helayaan xoog. Mana ahan wax kayar, cayaaraha xilligan waxay noqon doonaan kuwan boggaga cusub ee taageerayaasha waxay noqon karaan ciyaar fiidiyoow ah.
Wax walba dabcan waxay ku dhacaan instagram. Dhamaan kuwa shakiga qaba ee u maleynaya inaysan jirin wax xiiso leh halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Ciyaaraha oo ah farshaxanka cusub ee sawir qaadista
Abuur xaraf 3D leh Adobe Fuse
David Bowie wuxuu sii wadaa inuu dhiirigaliyo muuqaalkiisa